Indlela yokugqoka ngesitayela - Imfashini Yamadoda | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 15/11/2021 21:01 | Ukunakekelwa komuntu siqu, imfashini, Amathrendi
'Ukugqoka ngesitayela' kuyindlela yokugqoka lokho kwehluka ngaphakathi komuntu ngamunye. Izalwa ngobuntu bomuntu siqu, kumuntu owenza ihluke futhi ethile, kodwa ngokungazi. Ngokuqinisekile uzovuma ukuthi sonke sinendlela yethu yokugqoka, kungakhathaliseki ukuthi ilungile noma cha, njengoba lokho kusakha thina ngokwethu. ngobuntu.
Ngaphambi kwendlela yethu yokugqoka nokwenza ngesitayela kunamacebiso amaningana alokho akufanele banyamalale ukuba neqiniso. Kuthatha kwenze ngonembeza, sebenzisa konke onakho, udale isitayela futhi uhlale wengeza into ethile.
1 Izesekeli zokugqoka ngesitayela
2 Izindlela zokugqoka ngesitayela
3 Gqoka abasha kanye nesitayela
3.1 I-Urban, Surfer noma Isitayela se-skater
3.2 Isitayela se-Bohemian
4 Imininingwane yokugqoka ngesitayela
Izesekeli zokugqoka ngesitayela
Yonke imininingwane ibalulekile. Ukugqoka akuyona nje izingubo, kodwa ukuba noma thwala konke okukuphelelisayo ukukwenza ngesimilo. Ukubukeka kwakho nakho kubalulekile: uma ukhululekile, uhamba ngendlela efanele futhi uzizwa ukhululekile ukuxhumana, lokho izomaka isitayela esihle.
Ukuxhumana okungakhulumi nakho kwenza umehluko. Kufanele hlanzeka, unuke kahle, gqoka izinwele ezilungiswe kahle futhi ningagqoki izingubo eziguge kakhulu. Ngisho nendlela yakho yokukhuluma iyoba yiphuzu elibalulekile emininingwaneni nasekufinyeleleni izinjongo. Uma ufuna ukufeza yonke le mininingwane akuyona indaba yokwenza ngaphandle kokuningi, kodwa ka bazizwele ngokuqaphela.
Ingabe ukugqoka ngesitayela ukuba umnumzane noma ukugqoka kanokusho? Ngokweqiniso, kungase kube umkhuba wokudala le modity. Ukuba nenhle kuyindlela yokugqoka, okuyinto kuphawula ubuntu bomuntu, futhi ingafakwa njengendlela yokugqoka ngendlela engavamile. Ukuba umnumzane kuyingxenye yendlela yokuziphatha nokugqoka kahle, kodwa ukwakha amagugu omuntu ngamunye. Singase futhi sikufake njengomuntu onesitayela, kodwa akuyona indlela yabo yokusichaza.
Izindlela zokugqoka ngesitayela
Indlela yokugqoka ngesitayela ichazwa ngendlela ye bonakalisa ubuntu bomuntu ngamunye. Umuntu ngamunye unomfanekiso wakhe siqu, ukuthi uma enza ngawo izimpande ezinkulu nokudala ukukhanga. Izitayela zokugqoka zingasukela kwezasemadolobheni kakhulu kuye kwezingasoze zabuna noma ezezemidlalo. Kukhona izitayela zendabuko ezifana ne-Rock, Punk, Hippie, Gothic ezeqisayo kakhulu kodwa ezingenziwa ngobuntu. Noma isitayela se-Cowboy, Sport, Urban, Hip Hop noma Classic-elegant. Yisiphi lesi esihlotshaniswa kakhulu nobuntu bakho?
Gqoka abasha kanye nesitayela
Lolu hlobo lomkhuba Kudalelwe ukuthi kugqokiswe abantu abasha. Ukwenza ngesitayela kubalulekile ukwazi ukuthi kufanele kuhambisane neminyaka. Ukwazi indlela yokugqoka kahle ungafunda okukodwa kwe izindatshana zethu lapho sikutshela khona ukuthi kufanele ulungise kanjani lawo maphutha amancane lapho uthenga izingubo ozidingayo.
I-Urban, Surfer noma Isitayela se-skater
Ngokuyinhloko izitayela ezisetshenziswa kakhulu entsheni. Isitayela sasemadolobheni sihlanganiswe kulezo zingubo abathanda ukuzihlanganisa ngalezo zikhathi emgwaqweni futhi ngezikhathi ezithile. Ukuze udale le bhalansi, awudingi ukuphenya okuningi, kodwa siyaqiniseka ukuthi abantu abasha bayithanda kakhulu. ubulula bezingubo.
El isitayela se-skater ubelokhu emaka indlela yakhe yokugqoka amabhulukwe aminyene, amahembe abanzi namade, futhi nakuba kungase kungabonakali kanjalo, kuqale lapho. kuma-70s'. Le ndlela yokugqoka nayo ifakiwe njengendlela yokugqoka yasemadolobheni nalapho isitayela se-grunge ne-hipster sibuye sihambisane nayo.
El isitayela se-surfer Iphinde ibe ngenye yalezo eziheha kakhulu ukulahla izingubo zayo ngesitayela, idala ubusha nobuqili obuningi ngesikhathi sokugqoka. Siyawathanda lawo mamenes ane-scruffy, agqanyisiwe kanye nendlela yesi-Hawaii yokugqoka izingubo. Kungenye indlela yokudala umkhuba, ikakhulukazi emadolobheni aseduze nolwandle.
Ihlale idala umkhuba, ngoba izingubo zayo zihlala indlela yokuphila ezolile futhi ephumuzayo. Ibonisa imihlobiso engavamile, imibala engavamile, kanye okuvela kuhlanga noma kumahippie. Kuhle ukugqoka nsuku zonke, nakuba abaningi bekhetha ukukufaka ekuphumeni kwabo ngezimpelasonto.
Imininingwane yokugqoka ngesitayela
Sihlaziya amathiphu amancane azokusiza ukuthi udale isitayela sakho ngobuntu. Kufanele hlaziya umzimba wakho ukwazi ukuthi hlobo luni lwezingubo ezizofanelana nawe, njengesincomo kungcono khetha izingubo bese uzizama ngokwakho. Zama ukwenza isitayela esifana endleleni yakho yokuphila nokwenza, awukwazi ukusebenza kakhulu nokuthi uthanda i-bohemian.
Cabanga ngayo thenga izingubo ezilula, kodwa lokho kuphawula okuthile okuhlukile, futhi okungasetshenziswa iminyaka eminingana. Kufanele njalo unakekele izingubo zakho futhi lokho akubukeki kugugile kakhulu. Uma kuziwa ekuhlanganiseni izingubo, kufanele ukhethe ngokunambitha. Izesekeli zibalulekile kakhulu, ngakho-ke kufanele zibe zamanje kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Indlela yokugqoka ngesitayela